?Waan ka xunahay masiibada bini?aadatinimo ee ka dhacday Bossaso? Xasan Geerash, wasiirka ganacsiga ee Puntland. – Radio Daljir
Garowe, Decembar, 03 ? Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dawladda Puntland Xassan Faarax Jaamac ?Xassan Geerash? ayaa tacsi u diray dhammaan ganacsatadii hantidoodii ay ku gubatay suuqa wayn ee Bossaso.
Wasiirku waxaa uu sheegay in ganacsatada looga baahan-yahay inay samir iyo iimaan muujiyaan, arrintaana ay tahay musiibo bini?aadatinimo oo dhacday dawladduna ay samaysay dadaal kii ugu xooganaa balse dabadeed ay ku guulaysatay saakay in dabkaasi la damiyo.
Md. Xassan Geerash waxaa uu tilmaamay inuusan ka hordhacayn baaxada khasaaraha dabka, iyo sida ay wax u dhaceen, balse ay jiraan kulamo dag dag ah oo xilligaan u socda madaxda dawladda iyo xarunta rugta ganacsiga Puntland.
Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Puntland Xassan Geerash waxaa uu tilmaamay in Puntland aysan ku fashilmin dabkaasi inay damiso, isagoo sii wata hadalkiisa ayuu tilmaamay masuuliyada khasaarahaasi shacabka iyo ganacsatadu inay qayb-wayn ku leeyihiin. Waxaana uu sabab arrintaasi uga dhigay suuqa oo aan lahayn meelo bannaan oo laga damin karo dabkaasi.
Xassan Faarax Jaamac ?Xassan Geerash? wasiirka ganacsigu waxaa uu yiri ?marka la is bar-bar dhigo baaxada khasaaraha dabka, iyo rasaastii halkaasi ka rideen ciidanka amniga iyo sidoo kale ganacsatii hantidaasi lahayd, waxyeelada dhimashada iyo dhaawacu waa mid aad u sahlan, waana in Alle lagu mah-diyaa?.